musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » US Capitol complex yakabviswa nekuda kwekutyisidzira kwebhomba
Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kutyisidzirwa kwebhomba kwakataurwa kuma 10 am paHHS Humphrey Building mu200 block yeIndependence Avenue mudhorobha reDC Chivako ichocho chakabviswa.
Migwagwa mitanhatu yakatenderedza US Capitol neDhipatimendi rehutano muWashington, DC yakavharwa nhasi.
HHS Humphrey Building yakabviswa neChitatu mangwanani nekuda kwekutyisidzira kwebhomba.
Kune hukuru hwekutevedzwa kwemutemo kuvepo kwakatenderedza US Capitol chivakwa neHHS muWashington, DC.
Migwagwa yose yakapoteredza US Capitol uye US Department of Health muWashington, DC yakavharwa nemapurisa nhasi pamusoro pekutyisidzira kwebhomba munzvimbo iyi.
Migwagwa mitanhatu, kusanganisira Washington Avenue neThird Street, yakavharwa apo Mapurisa eCapitol aiongorora kutyisidzira kwebhomba kuUS Department of Health and Human Services pana Independence Avenue - iyo yakavharwawo nemapurisa.
Kune hukuru hwekutevedzwa kwemitemo munzvimbo. Mapurisa eHomeland Security akaonekwa munzvimbo iyi achivhara migwagwa uye mhomho yevanhu vakabuda muzvivako zvakawanda zviri pedyo vakaungana kunze kweUS Capitol.
Sarah Lovenheim, Mutevedzeri weHHS Secretary for Public Affairs, akapa chirevo chinotevera:
“Mangwanani ano pane kutyisidzira kwebhomba kwakagamuchirwa paHumphrey Building. Kubva mukuchenjerera kwakawanda, takabuda muchivako uye hapana chiitiko chakashumwa. Isu tiri kutarisa mamiriro ezvinhu zvakanyanya neFederal Protective Service. Chero mibvunzo inogona kuendeswa kuFederal Protective Service. "
HHS iri kushanda neFederal Protective Service kuti iongorore mamiriro ezvinhu, maererano naLovenheim.
Imba yeCapitol yave iri chinangwa chekuwedzera kwehuwandu hwekutyisidzira kubva muna Ndira apo mhomho yezviuru zvevatsigiri vevaimbove Mutungamiriri wenyika, VaDonald Trump, vakarova musangano weCongress.